Maalinta: Febraayo 3, 2020
Madasha Maalgashiga Dalxiiska ee ay soo qaban qaabisay TTYD ee Istanbul, fursadaha hodanka ah ee Dalxiiska Erciyes iyo gobolka ayaa lagu sharxay maalgashadayaashana waxaa lagu casuumay Erciyes. Dalxiiska Investors Association of Turkey (TTYD) by iyo oo taageero ka Office Investment Madaxtooyada [More ...]
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuxuu mudnaanta siinayaa maalgashiga metro sidii uu ballan qaaday. Kaddib marinnada dhulka hoostiisa mara ee Sultanbeyli iyo Ataşehir, dhismaha metrooga saddexaad, "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro", ayaa mar kale bilaabmay. Imamoglu, Mecidiyekoy-Mahmutbey [More ...]
Ku biirinta degmada Bursa Metropolitan Municipal iyo Burulaş, 28 microbuse cusub oo ay qaateen Güzel Gemlik Bus iyo Minibuscular Iskaashiga ayaa la galiyay xaflad. Duqa Magaalada Bursa Metroinitan Alinur Aktaş, dhanka kale, [More ...]
Codsiga dhulka hoostiisa ee habeenkii, oo billowday Agoosto 30, 2019, wuxuu gaadhay 6 milyan 1 kun oo rakaab ah 210 bilood gudahood. Dadka reer Istanbul ayaa sheegaya inay doorbidayaan metroga inay si nabad ah u safraan habeenkii. Kuxigeenka Xiriirka Dowladaha Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Qulqulka korontada wuxuu aad ugu egyahay il biyo ah, halkii ay ka heli lahaayeen kaliya moleekule biyo ah oo webiga ku dhajinaya, walxaha ay ka kooban yihiin ayaa lagu dallacayaa dariiqa korantada. Korantada hada jirta, xawaaraha dacwada ee ku qulqulaya dusha sare [More ...]
Wasiirka Dalxiiska Turhan İsmail Ustaoğlu, AK Party Trabzon Kuxigeenka Salih Cora, Duqa Magaalada Trabzon Murat Zorluoğlu, Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Abdulkadir Uraloğlu, Gudoomiyaha Gobolka AK Party Haydar Revi, Ortahisar [More ...]
Shirkadda ESHOT, oo maamushay warshadii ugu horreysay ee tamarta qorraxda laba sano iyo bar ka hor, waxay dhiseysaa seddex kale. Gudbinta tas-hiilaadka cusub, ESHOT waxay la kulmi doontaa dhamaan baahiyadeeda korantada ee ka timaadda haamaha qoraxda. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ESHOT [More ...]
Wasiirka Turhan, TCDD Tasimacilik AS. Khudbaddiisii ​​uu ka jeediyay Shirka Isuduwidda iyo Wadatashiga 1aad ee Agaasinka Guud, wuxuu ku sheegay in shirkaddu tahay mid ka mid ah ururradii ugu caansanaa ee la aasaasay dhowaan. Dhaqaalaha dalka, siyaasada, bulshada iyo [More ...]
Dugsiga Sivri Cumhuriyet ee Divriği Nuri Demira School Dugsiga xirfadda “Divriği Nuri Demirağ Dugsiga xirfadda ee ujeedada loo leeyahay horumarinta kaabayaasha jirka iyo ilaha aadanaha sida fasalka, shaybaarka, aqoon isweydaarsiga, qalabka mashiinka iyo agab waxbarasho. [More ...]
Madaxtooyada Isgaarsiinta ayaa bilaabay websaydhkeeda "Kanalistanbul.gov.tr", kaas oo ka kooban faahfaahinta mashruuca Kanal Istanbul iyo jawaabaha dhamaan su'aalaha. Ku dhawaaqida in mareegta loogu magacdaray "Kanalistanbul.gov.tr" oo ay diyaarisay Agaasinka Isgaarsiinta ayaa laga furay Twitter. [More ...]